छिमेकीलाई चिढ्याउन घरमा इमोजी
अमेरिकाको लस एन्जलस शहरस्थित म्यानहाटन समुद्री तटमा रहेको एउटा घर अहिले चर्चामा छ । घरमा गुलाबी रङ लगाइएको छ र दुई वटा इमोजीको चित्र कोरिएको छ । दुई ठूला इमोजीका आँखीभुइँ बाक्ला छन् । एउटा इमोजीको जिब्रो बाहिर निक्लिएको छ भने अर्काे इमोजीको मुखमा जिपर छ ।
लस एन्जलस टाइम्सका अनुसार यो घर क्याथरिन किडको हो । केही महिनाअघि छिमेकीले उनको घर अवैधानिक रूपमा भाडामा लगाइएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । किडले चार हजार डलर जरिवाना तिर्नुपरेको थियो । त्यसैको बदला लिन उनले एक जना कलाकारलाई घरमा इमोजीको दुइटा चित्र बनाउन लगाएको छिमेकी सुसन विल्यान्डको आरोप छ । ‘मैले आँखामा आँखीभुइँ विस्तार गरेकी थिएँ,’ विल्यान्डले भनिन्, ‘इमोजीका बाक्ला आँखीभुइँले मलाई व्यंग्य गरेका हुन् । मलाई किडको घरमा हेर्नेबित्तिकै नमज्जा लाग्छ । मलाई नै आक्रमण गरेजस्तो लाग्छ ।’
तर, क्याथरिनको भनाइ भने फरक छ । उनले आफ्नो घरमा इमोजी बनाउन लगाउनुको कारण कसैलाई चिढाउनु नभएको बताइन् । ‘मैले त सबैलाई खुशी रहन, रमाइलो गर्न र सकारात्मक हुन सन्देश दिएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘यी दुई इमोजी कसैलाई व्यंग्य गर्नका निम्ति बनाउन लगाएकी होइन ।’
किडले घर रंगाउने जिम्मा दिएकी थिइन्, जेड द आर्ट नामक कलाकारलाई । जेड द आर्टले किडको घरको तस्बिर आफ्ना इन्स्टाग्राममा राख्दै लेखेका थिए, ‘तपाईंलाई छिमेकीले दुःख दिएका छन् ? हजारौँ डलर जरिवाना तिर्न बाध्य पारेका छन् ? त्यसो हो भने उनीहरूलाई पाठ पढाउन मलाई लगाउनुहोस् । म घर रंगाएर तपाईंका छिमेकीलाई विशेष सन्देश दिन सक्छु ।’
छिमेकी विल्यान्डले किडलाई यत्तिकै नछोड्ने बताइन् । ‘उनीविरुद्ध कानुनी कारबाहीको बाटोमा जानेछु,’ उनले भनिन् ।